दैनिक १५ हजार जनाको भिड थाम्नै गाह्रो,बन्द हुन सक्ने अम्ब्रेला स्ट्रीट – Tufan Media News
दैनिक १५ हजार जनाको भिड थाम्नै गाह्रो,बन्द हुन सक्ने अम्ब्रेला स्ट्रीट
१६ पुष २०७७, बिहीबार ०९:१२
अचेल न्युरोड गेट कट्न नपाउँदै मान्छेहरूका अनेकन बान्कीले ध्यान खिच्छ। गेटबाट देब्रे मोडिएर संकटा मन्दिर जाने बाटोमा कोही हाँसिरहेका छन्, कोही नाचिरहेका। कोही गीत गाइरहेका त कोही विभिन्न पोज दिइरहेका।
टिकटकमा अरूले हालेको भिडिओमा यो रोड कस्तो राम्रो देखिएको थियो। नजिकै भएर पनि होला, छाता हेर्न मन लागिहाल्यो,’ सुस्मिताले भनिन्, ‘केही टिकटक बनायौं, फोटो खिच्यौं। रमाइलो लाग्यो।’अरू सबै राम्रो भए पनि अत्यधिक भिड उनीहरूलाई मन परेन। एक घन्टा घुमेर घर फर्किने मनसाय बनाएका उनीहरू दुवैले आफूलाई टिकटकमा फलो गर्न र भिडिओ लाइक गर्न अनुरोध गरे।
संकटा क्लब र स्थानीय व्यापारीहरूले व्यापारिक माहोल सिर्जना गर्न छाता राखी आकर्षण थपेका हुन्।तर योजना अनुसार काम भएन। डेढ सय मिटर सडकमा छाता टाँगिएको एक साता मात्रै हुँदा यहाँ दैनिक १५ हजार घुम्न आउने गरेको एक फुटपाथ व्यापारीले बताए। फुटपाथमा कपडा व्यापार गर्दै आएका उनले भने, ‘मानिसहरू आउनु राम्रै हो। मान्छे आउँछन्, चहलपहल बढ्छ, व्यापार बढ्छ भन्ने नै सोचेर छाता राखिएको थियो। तर यहाँको भिड देखेर नियमित ग्राहक पनि तर्किएर जान्छन्।’
‘चार दिन भयो सडकको छेउ बनाउन थालेको। गरे-नगरेको बराबर छ,’ तामाङले भने, ‘काम गर्दै जान्छु, कुल्चिँदै जान्छन्। कतिलाई गाली गर्नु? दोहोर्‍याएर काम गर्नु परेको छ।’ एकातिर सडकको काम रोकिएको छ, अर्कातिर जाम बढेको छ। मान्छे र साना सवारीको हुलमुलले यो मेलाजत्तिकै भएको छ। यहाँ फुर्सदले भिडिओ बनाउन र फोटो खिच्न पनि पाइँदैन। त्यसैले धेरैले टिकटक रमाइलो गरी लेख्छन् पनि- भिडिओ बनाउने वातावरणै छैन।
‘हामीले सामान्य रूपमा मानिसहरूको आवतजावत बढोस् भनेर यस्तो उपाय लगाएका थियौं। तर अहिले हामीले पनि नसोचेको भयो,’ सचिव सिंहले भने, ‘दैनिक १५ हजार मानिस घुम्न आएको हाम्रो अनुमान छ। बिहानदेखि साँझसम्म नै उस्तै भिड हुन्छ।’
‘लकडाउनले भित्री सडकको व्यापार चौपट पारेको थियो। कसरी ग्राहक तान्ने, कुनै उपाय लागेन,’ सिंहले भने, ‘मैले नै यो उपाय लगाएको हुँ। सबैको सहमति भएपछि छाता राखियो।’तर सबै आकर्षण र भिडले सोचेजस्तो नतिजा कहाँ दिन्छ र! यो सडकको सजावटले फाइदाभन्दा बढी झमेला बढाएको छ।उनले अगाडि भने, ‘भिडअनुसार व्यापार नभए पनि हेर्दा पहिलेभन्दा राम्रो भएको व्यापारीहरूले बताइरहेका छन्। म आफैंलाई पनि महसुस भएको छ। तर नयाँ वर्षपछि पनि यस्तै भिड भइरह्यो भने त हामीले छाता हटाउने वा बन्द गर्ने पनि सोचिरहेका छौं।’यसबारेमा स्थानीयहरूसँग पनि सल्लाह भइरहेको उनले बताए।